United Airlines na-agbasa usoro oge opupu ihe ubi
Home » Akụkọ ụgbọ elu » United Airlines na-agbasa usoro oge opupu ihe ubi
Naanị oge maka inye ekele, United Airlines na-enye ezinụlọ gafee mba isiokwu nke mkparịta ụka onye ọ bụla nwere ike ikwenye na tebụl nri abalị - atụmatụ ezumike ezumike ezumike. Linegbọ elu ahụ na-agbakwụnye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 150 ụgbọ elu ndị ọzọ n'etiti ogige ya na ebe ezumike mmiri na-ewu ewu gụnyere Arizona, Florida, Hawaii, Mexico, Caribbean na họrọ ebe eji egwu mmiri.
"Anyị chọrọ ka ndị ahịa anyị mara na, n'agbanyeghị ebe ha chọrọ ịga ezumike, mmiri ụgbọ elu United United nwere ike ị nweta ha ebe ahụ," ka Ankit Gupta, osote onye isi ala nke United Domestic Network Planning kwuru. "Nke a bụ oge nke afọ mgbe ndị ahịa anyị na-amalite iche echiche ma na-eme atụmatụ izu oke zuru oke, yana oge mgbụsị akwụkwọ anyị gbasaa, anyị na-enye ọtụtụ ụgbọ elu na ebe ndị ọzọ karịa ka ọ dịbu."
N'oge opupu ihe ubi a, United na-agbakwunye ụgbọ elu ndị ọzọ gaa ebe ezumike mara mma gụnyere: ụgbọ elu 31 gaa agwaetiti 12 na Caribbean; 28 ụgbọ elu ndị ọzọ gaa obodo asaa na Mexico; Ugbo elu 27 na ebe asaa na Central America tinyere ụgbọ elu 16 na Costa Rica; ụgbọ elu atọ na Guatemala; na ụgbọ elu atọ na Belize.
United kwupụtakwara ndọtị nke ọrụ ọhụụ ọhụụ ya n'etiti Chicago na Brownsville / South Padre Island site na njedebe nke oge njem mmiri na Eprel. N'ofe United States, United na-agbakwunye ụgbọ elu asaa ọzọ na Phoenix na Tucson, Arizona; 15 ụgbọ elu ndị ọzọ na-aga 10 obodo na Florida; ụgbọ elu asatọ ọzọ gaa agwaetiti anọ na Hawaii, na ụgbọ elu 10 ọzọ na-aga anọ na ebe mgbago ski kachasị dị na Colorado, gụnyere Vail, Crested Butte, Steamboat Springs na Telluride.
Na-agbakwunye ụgbọ elu ọhụrụ ise na-enweghị nkwụsị si Denver
Mgbasa ntanetị nke United na-agụnye ọrụ ọhụrụ na-enweghị nkwụsị gaa ebe osimiri dị na Florida na Texas. Airgbọ elu ahụ mara ọkwa na ọ ga-amalite ọrụ n'etiti Denver na Destin, Palm Beach, Pensacola na Sarasota, Florida, na n'etiti Denver na Brownsville / South Padre Island dị na Texas. Site na ọrụ ọhụrụ a, United na-enye ọrụ na-enweghị nkwụsị n'etiti Denver na Florida karịa ụgbọ elu ndị ọzọ.